Fitaovan'ny vatana lehibe: fingotra vita amin'ny polarized
Lining: lamba tady nylon
Frame: tariby vy mafy
Size: 1/2 ″ -72 ″ (DN15-DN1800)
Famaritana fanerena: PN10 / 16, Class125 / 150
NORTECH dia iray amin'ireo Shina mitarika Fiaraha-manitatra amin'ny fitrandrahana fingotra Singl sehatra Mpanamboatra sy mpamatsy.
Sphere kambana mitambatra fanitarana
NORTECH dia iray amin'ireo Shina mitarika Sphere kambana mitambatra fanitarana Mpanamboatra sy mpamatsy.
Gasket maratra mandritry ny havizanana sy ny fifanakalozana hafanana ary ny gropy nokleary ary ny gasket spiral HDLE. NORTECH dia iray amin'ireo Shina mitarika Gasket maratra Mpanamboatra sy mpamatsy.
Multi-turn Electric Actuator HEM Series switch karazana
Ny andiany HEM dia taranaka vaovao mpihetsiketsika herinaratra marolafy namboarina sy novokarin'ny ekipa teknikan'ny NORTECH mifototra amin'ny filan'ny mpampiasa sy ny traikefa niainany nandritra ny taona maro.
Ny andiany HEM dia afaka mamokatra modely isan-karazany arakaraka ny filan'ny mpampiasa, toy ny fototra, manan-tsaina, bisy, fisarahana marani-tsaina ary endrika hafa, izay azo antoka, marin-toerana ary azo antoka hihaonana amin'ny sehatry ny fampiharana isan-karazany amin'ny sehatra samihafa.
Ireo mpikatroka herinaratra miverimberina HEM dia azo ampiasaina tsy amin'ny valves mahitsy fotsiny toy ny fandrindrana valves, valves valves, ary valves stop, fa miaraka amin'ny valves stroke-corner toy ny valves lolo, valves ball, ary valves plug aorian'ny fametrahana a boatin-kankana miova tapany.
HEM series series output mivantana dia 60N.m-800N.m, ny hafainganam-pandeha famoahana dia 18rpm-144rpm, araka ny hafainganam-pandeha hafa sy ny hafainganam-pandeha hafainganam-pandeha, miaraka amina boaty kankana manokana elektrika azo ovaina ho takiana torque lehibe kokoa sy bebe kokoa.
NORTECH dia iray amin'ireo Shina mitarika Multi-turn Electric Actuator Mpanamboatra sy mpamatsy.
Fizarana ampahany mihodina mavitrika Electric Model an'ilay fipoahana porofo LQ
Ireo mpihetsiketsika valizy modely LQ dia taranaka vaovao amin'ny orinasanay ary azo ampiasaina amin'ny familiana sy fifehezana ireo valizy lolo, valizy baolina ary valves plug (valizy mihodina miaraka amin'ny hetsika 90 °). Miaraka amin'ny asan'ny fifehezana eo an-toerana sy ny fanaraha-maso lavitra.
● Ampiasaina betsaka any an-tsaha izy ireo toy ny solika, simia, famokarana herinaratra, fitsaboana rano, fanaovana taratasy. Sns
● Ny fiarovana ny fonosana dia IP67, ary ny kilasy manaporofo ny fipoahana dia d II CT6 (LQ1, LQ2) ary d II BT6 (LQ3, LQ4, LQ4JS)
NORTECH dia iray amin'ireo Shina mitarika Fizarana iray mihodina porofo mipoaka ny mpikatroka herinaratra Mpanamboatra sy mpamatsy.
Ampahany mihodina herinaratra Actuator
Ampahany mihodina herinaratra actuator .
NORTECH electr actuator dia ampiasaina hifehezana 0 ~ 300. Valve mihodina sy vokatra hafa mitovy amin'izany, toy ny valizy lolo, valves ball, dampers, valves plug, valves louver, sns., Mampiasa AC415V, 380V, 240V, 220V, 110V, DC12V , 24V, 220V AC famatsiana herinaratra ho toy ny loharanom-pahefana mitondra fiara, miaraka amin'ny 4-20mA ankehitriny Ny famantarana na ny 0-10V DC malefaka famantarana dia ny famantarana fanaraha-maso, izay afaka mamindra ny valva amin'ny toerana irina ary mahatsapa ny fifehezana mandeha ho azy. Ny tavy famoahana farany ambony indrindra dia 6000N-m, izay azo ampiasaina betsaka amin'ny solika, simika, herinaratra, metallurgy, pharmaceutique, fanaovana taratasy an-tsokosoko, angovo, fitsaboana rano, fandefasana, lamba, fikarakarana sakafo, fanamboarana automatique ary saha hafa. Mandritra izany fotoana izany dia manana tombony maro izy io toy ny habe kely, lanja maivana, fisehoana tsara tarehy, firafitra tsy manam-paharoa, mora vidy, fanokafana haingana sy fanidiana, fametrahana mora, torolàlana kely miasa, fandidiana mety, toerana valizy nomerika fampisehoana, tsy misy fikojakojana sy azo antoka ary fampiasana mety.
NORTECH dia iray amin'ireo Shina mitarika Ampahany mihodina herinaratra actuator Mpanamboatra sy mpamatsy.
ASME Swing valve check, vy karbaona, vy vy ary vy firaka
Mifanatrika amin'i ANSI B16.10
Vatana / bonnet / Disc: WCB / LCB / WC6 / WC9 / CF8 / CF8M
Karakarao: No.1 / No.5 / No.8 / firaka
NORTECH dia iray amin'ireo Shina mitarika ASME Valizy fanaraha-maso Swing Mpanamboatra sy mpamatsy.
Valizy fanamafisana static
Valizy fanamafisana Static, BS7350
Valim-panaraha-maso indroa miiba Orifice (FODRV) ary valizy miiba roa Orifice (VODRV)
DN65-DN300, Flange mifarana DIN EN1092-2 PN10, PN16
Vatana sy bonnet an'ny vy muly GGG-40.
Tapa-by vy. Famehezana: EPDM.
Orifice miovaova. Fitsipika roa.
Miasa mari-pana -10ºC + 120ºC.
NORTECH dia iray amin'ireo Shina mitarika Valizy fanamafisana static Mpanamboatra sy mpamatsy.
API602 Valve vy vita amin'ny vy vita amin'ny vy
Vatana: A105 / F11 / F22 / F304 / F304L / LF2 / LF3 / F316
Karakarao: No.1 / No.5 / No.8, SS304 / SS316 / Monel
NORTECH dia iray amin'ireo Shina mitarika Valve vy vita amin'ny vy vita amin'ny vy Mpanamboatra sy mpamatsy.
Valizy DIN-EN Globe, Valin-drindrin'olon-drindrina mahitsy (Tee pattern), valin-joro amin'ny zoro globe, Valvely globe modely Oblique (karazana Y)
dia azo noforonina ho toy ny valizy fanamarinana, valizy fanamarinana manerantany, SDNR.
misy tombo-kase azo alaina amin'ny fangatahana fangatahana setroka avo lenta
Volavola sy mpanamboatra EN13709, savaivony DN15-DN400, PN16-PN100.
amin'ny vy vy (1.0619), vy tsy misy fangarony (1.4308,1.4408), vy vy ary vy tsy misy fangarony duplex
NORTECH dia iray amin'ireo Shina mitarika DIN-EN Globe Valve Mpanamboatra sy mpamatsy.
Valizy ambanin'ny tany
Valizy mikatona valin'ny tany, amin'ny vy vy, vy vy ary firaka vy, ho an'ny setroka avo lenta.
Valin-drakitra mahitsy globe (Tee pattern), valin-joro amin'ny zoro globe, Valvely globe modely mivezivezy (karazana Y)
Drafitra sy mpanamboatra DIN3356 / EN13709
NORTECH dia iray amin'ireo Shina mitarika Valve Bellows Seal Globe Mpanamboatra sy mpamatsy.
ASME Globe Valve, 2 ″ -30 ″, Class150-Class1500
Vatana / bonnet / kapila: vy vy / vy tsy misy fangarony
Fipetrahana: Stee karbonika // Stainless vy / STL
Fiasa: boaty tànana / boaty
NORTECH dia iray amin'ireo Shina mitarika ASME Globe Valve Mpanamboatra sy mpamatsy.